काभ्रेबाट माधव नेपालको पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा को-को परे ? – मिलिजुली खबर
काभ्रेबाट माधव नेपालको पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा को-को परे ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेको दल विभाजन सम्बन्धित अध्यादेश माधव-झलनाथ समूह
प्रमाणीकरण गरे लगत्तै एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले अर्को नयाँ दल दर्ता गराउनु भएको छ ।
एमाले समाजवादी नाम रहेको पार्टीमा ९५ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । काभ्रे जिल्लामा पनि माधव-झलनाथ समूहको राम्रो जनधार मानिन्छ । तर ९५ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा काभ्रेकि एक जनापनि परेका छैन् ।
काभ्रेमा माधव-झलनाथ समूहमा तत्कालिन एमालेमा निकै राम्रो प्रभाव पार्ने नेताहरू संविधान सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद सापकोटा र विदुर सापकोटा पनि हुनुहुन्छ । अनुभवले खारिएका उहाँहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा पर्नु भएन् ।
तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित ४ जना सांसद मध्ये संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गतको प्रदेश (क) का सांसद लक्ष्मण लम्साल र प्रदेश (ख) का सांसद बसुन्धरा हुमागाई माधव-झलनाथ समूहमै हुनुहुन्थ्यो । तर आज बागमती प्रदेशको एमाले संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दुबै सांसदले समर्थन गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अष्टलक्ष्मी शाक्यको पक्षमा राजेन्द्र पाण्डे मात्रै नरहेको बताइएको छ । काभ्रेमा माधव-झलनाथ समूहको बलियो जनधार हुँदा हुँदै एक जना नेता समेत केन्द्रीय कमिटीमा नसमेटिनुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।